Iindaba kunye neentsingiselo |
Inkxaso yeminxeba Ngama-86-13682157181
Itheyibhile esecaleni yeBhasikithi
Isofa yokulala 2
Isofa yezihlalo ezininzi
Itafile yokutya kunye ne-MDF
Kukho imiphezulu yeetafile zetafile yokutyela, enjengeglasi enomsindo, ukhuni olomeleleyo, ifreyibodi yesidanga esiphakathi njl. Medium-density fiberboard luhlobo lwebhodi eyenziwe ngumntu eyenziwe ngomthi okanye ifayibha yesityalo ngokwahlukana koomatshini kunye nabanyangi ...
Sihlalo woKutya kuKhuthazo
Isitulo esinye sokutya kunyuselo kwaye nathi sinesona sibonelelo sikhulu: ixesha lokuhambisa elifutshane kwaye kuthatha kuphela iintsuku ezisi-7 ukuya ku-10 ukwenza iimpahla zilungele. Ngelaphu lentlabathi kunye nelaphu elingqingqwa elicikizekileyo, livakala lithambile kwaye ligudile xa uyichukumisa. Ngaphandle koko, njengenye yeemveliso ezithengisa kakhulu emhlabeni, ...
Ukukhethwa kwamalaphu kwizitulo zokutya, Izitulo zeLounge kunye neeSofa
Isebe lethu le-R & D aligcini ngokujonga kwisitayile semveliso nokuba sisihlalo sokutya, isitulo sokuphumla, isofa njl.njl.Kwaye nelaphu elisefashonini yenye yezinto esiyiqwalaselayo. Rhoqo ixesha lonyaka, Ukubonelela ngeendlela ezininzi onokuzisebenzisa kunye nabathengi bakho, siya kujonga ilaphu elidumileyo ...
Ukuhlala kuSihlalo Kubume be-KD ye-E-Commerce
Urhwebo lwe-E lwandisiwe kakhulu ngenxa yobhubhane, yiyo loo nto indleko zamalungiselelo emveliso yinto ebalulekileyo kwintengiso ye-E-yorhwebo. Kukho imfuno engaphezulu nangaphezulu yeemveliso kwishishini lefenitshala ukuba zibekho kwisakhiwo seKD esiya kuqinisekisa ukulayishwa okuphezulu ...
Izinto zefanitshala yaseOfisini
Apha ngezantsi isihlalo sethu esisezantsi sokuthengisa i-6 sithengisa ngeofoto, imveliso engaphezulu yesibonelelo iya kuthunyelwa wakube ucebise imodeli oyikhethileyo. Uyilo olulula kodwa oluhle olukhangeleka ngokudibeneyo kunye nomsebenzi wokuphakamisa ukuhlangabezana neemfuno ezibonakalayo nezentuthuzelo zabantu. Ezi mveliso zintandathu zifumene ...
Izitulo zokutya kunye noSihlalo weOfisi
Ibe yiveki exakekileyo yokuqhubekeka neeodolo ezintsha esizifumene ngexesha elifanelekileyo kwaye sijongana nemibuzo emitsha esiyifumeneyo. Ezi zitulo zokutyela zingezantsi ndingathanda ukuveza kuwe ziimodeli ezimbini zeemveliso zethu ezishushu zokuthengisa kwaye zibekwe ii-odolo kwindawo elungileyo nasemva kokulungileyo. Ngep ...
Ifanitshala eSebenzayo: Ingxowa yoGcino
Bahlobo abathandekayo be-KSD, iPouf enomsebenzi wokugcina ihlala iyenye yezona ndawo zibalulekileyo zokuhombisa ekhaya. Kufuneka ibenendawo yokugcina kunye neempawu zobuhle, ngelixa ungathathi indawo enkulu. Ingqolowa esiyicebisayo namhlanje yimilo yoxinano, i-DIA 33 cm kunye nokuphakama kwama-38 cm. Inesiciko phezulu ...
Ukutya: Ukutya kwetafile kunye noSihlalo wokutya
Isidlo sangokuhlwa yenye yeentetho zabantu abazithandayo xa befuna ukuveza imvakalelo okanye uvakalelo. Kwaye njengomthwali wetafile yokutyela, ngokuthe ngcembe uye waba yinxalenye ebalulekileyo yomoya. Namhlanje, ndingathanda ukwazisa enye yeeseti zethu zokutyela - itafile enye nezitulo ezintandathu. Cima ubushushu ...
Ibhentshi enelaphu Upholstery
Kunye nomkhwa wolungiselelo lwegumbi lokutyela lwanamhlanje, ibhentshi endaweni yesitulo iye yanda ngakumbi ngoku mva nje. Yibhentshi e-1 kuphela, izitulo zokutyela ezi-2 kunye netafile yokutyela e-1, emva koko uya kuba nendawo yokutyela yabantu aba-4. Ilula kwaye yahlukile. Ke namhlanje, sicebisa enye yebhentshi yakho kuwe, isihlalo selaphu, i-Bl ...
Ngokunyuka kwemfuno yefenitshala esebenzayo ziintsapho, "Ifanitshala + Umsebenzi" ngumkhwa kwaye uya usiba ngakumbi nangakumbi. Ifenitshala esebenzayo njengokuhlala isofa, isofa yokugcina, itafile yekofu yokugcina, isitulo esijikelezayo njl njl zamkelwa ngabathengi. Iingcebiso zanamhlanje, th ...
Usihlalo oMhlophe oMhlophe
Kule mihla sifumana imfuno enkulu yezihlalo zilandelayo zithengisa ukutya eshushu esingathanda ukwabelana ngazo apha. Ukuba uyayithanda into entle kunye nendawo yoku-odola ngalo mzuzu, uyakwabiwa ngexabiso elihle kakhulu, kuba ixabiso leyunithi liphantsi kakhulu ngenxa yemfuno enkulu kunye nemveliso enkulu ...
Pouf entle yokuhombisa iKhaya
Bahlobo abathandekayo be-KSD, kubonakala ngathi iinkuku kunye nezitulo ezincinci zithandwa ngakumbi ngokuphatheka kwayo kwaye kulula ukuthelekisa enye ifanitshala kwigumbi lokuhlala njengesofa kunye netafile yekofu. Ngaphandle koko, inokusetyenziswa njengendawo yokuhlala kunye netafile encinci, ethi iluncedo ekwenzeni igumbi lakho lilandelane. Namhlanje ndingathanda ...
Lwedilesi: West of Langda Road, Fengliu Village, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei kwiPhondo, China.